Olee otú iji tọghata Spotify na faịlụ MP3
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata Spotify ka MP3
Bụ n'ebe ọ bụla ga-ekwe omume ibudata Spotify music na iji tọghata MP3? M nwere ike ime na ihe ọ bụla na ndekọ software (music Downloader, music edekọ) ma ọ bụ na e nwere ụdị ụfọdụ nke pụrụ iche Spotify Ripper? --Jamison
Spotify, a nkwanye redio ọrụ, na-enye music hụrụ na-enwetụbeghị ụdị ya na-ajụ na-achọpụta ọhụrụ music. N'ihi na Spotify hụrụ, ikekwe ha nwere otu chọrọ ka Jamison. Ha ga-achọ iji tọghata Spotify ka MP3 mere na ha pụrụ ige ntị na ha na ụgbọ ala Player ma ọ bụ na ha na kọmputa offline, ọbụna ọkụ converted Spotify MP3 n'ime CD maka collection.
Dabara nke ọma, ị na-na-nri ebe chọta ọtụtụ oké ngwaọrụ (music Downloader, music edekọ) na-atụ aro iji tọghata Spotify ka MP3. Otu bụ a desktọọpụ program-- Wondershare TunesGo, na otu onye bụ a nchọgharị Adon na Imea - Deezify na ngwọta ikpeazụ bụ ihe online service--Spoty-mp3.com.
Ngwọta 1: Wondershare TunesGo
Akpaghị aka download Spotify music na faịlụ MP3 na efu àgwà ọnwụ
Amamihe na-aghọta song Ama, gụnyere album cover, ọgụ egwu na ndị ọzọ
Nọgidere download Spotify listi ọkpụkpọ ma kewaa ọ bụla 2 songs na-akpaghị aka
Converting Spotify ka MP3 site TunesGo
Na-esonụ bụ ihe dị mfe instructional na akakabarede MP3 si Spotify. Usoro ihe omume (music Downloader, music edekọ) na-eme ka o kwe omume maka otu-awụ ọsọ n'ugwu, listi ọkpụkpọ, nakwa dị ka redio na-ebudatara. Na ya ọbụna kwe gị ka ị na-eme otú na a oge.
Nzọụkwụ 1 Nwụnye na-agba ọsọ ahụ Spotify ka MP3 Ntụgharị
Nanị pịa na njikọ n'elu inweta na ibudata a Spotify ka MP3 Ntụgharị (music Downloader, music edekọ). Ị nwere ike ozugbo wụnye ya nri mgbe ọ na-e ebudatara. The wụnye ọkachamara ga-enyere a ngwa-ngwa paced na nrụgide-free nwụnye usoro. Site wụnye, na-emeghe kwuru software ele a dị ọcha window dị ka e gosiri nri gị.
Were-achọpụta na omume na-agba ọsọ abụọ nsụgharị, ya mere, jide n'aka na-họrọ ihe kwesịrị ekwesị oke maka kọmputa gị (Win & Mac). Ma ndị yiri, ya mere anyị ga-egosi na a sample na iji version kpọmkwem maka Windows.
Nzọụkwụ 2 Malite iji tọghata Spotify ka MP3 (music ndekọ)
Ihe mbụ na-eme bụ iji chọọ na-agba ọsọ ahụ Spotify akụ na-ịchọrọ ị-e dere na nchọgharị gị. Nke a nwere ike mere site na-aga n'ime isi interface mgbe ahụ na ịpị / ịpị bọtịnụ sị "teepu" hụrụ na ekpe na elu nke Spotify ka MP3 Ntụgharị ihuenyo.
Nke a smart Spotify ka MP3 ngwá ọrụ (music Downloader, music edekọ) ga-akpaghị aka ịnọ ma dekọọ ọdịyo nke Spotify akụ ka anya dị ka ọ na-amalite na-egwu site na ụda kaadị nke kọmputa na-eji. Jide n'aka e nweghị ọzọ audio faịlụ na play mere na a ga-enweghị ịdọkapụta ụda mgbe ị na-amalite Ndekọ. Mgbe Spotify songs a mere, pịa bọtịnụ maka "teepu" ọzọ, nke a oge na-akwụsị ndị na usoro nke ndekọ. The akụkụ kasị mma banyere nke a ngwa bụ na o nwere akpaka atụmatụ converting Spotify songs ka MP3 mgbe ndekọ a na-eme, ya mere, ị na-adịghị na-egosi mmepụta format na-MP3.
Nzọụkwụ 3 Import converted Spotify MP3 ka iTunes
Ọ bụ nnọọ mfe nyefee si Spotify ka iTunes. Ma nri-pịa-awụ ọsọ n'ugwu mgbe ahụ họrọ button sị "Tinye ka iTunes Library", ma ọ bụ ịhọrọ-awụ ọsọ n'ugwu mbụ ahụ pịa bọtịnụ sị "Tinye ka iTunes". Si ebe a ị nwere ike ugbua na-ele Spotify-awụ ọsọ n'ugwu na TunesGo playlist on iTunes. Ugbu a niile i nwere ime bụ na-esi gị iPhone, nkwụnye ya na, na mmekọrịta ndị Spotify MP3.
Na-achọ gị MP3 faịlụ na mpaghara gị nchekwa, nanị ịhọrọ akụ wee pịa akara ngosi maka nchekwa hụrụ na ala akụkụ. Si ebe a, gị ibughari media egwuregwu nwere ike na-enweta gị MP3 faịlụ site mfe idetuo na mado. Nke a bụ mma gị na doorstep!
Ngwọta 2: Deezify
Deezify bụ ndọtị maka Chrome na-enyere gị ịzọpụta na tọghata Spotify ka MP3 mfe. Ọ na-enye gị ike ibudata music si Spotify, Deezer, Xbox Music na-enweghị ókè na mgbasa ozi.
Jiri Deezify ibudata Spotify ka MP3 dị mfe. Họrọ Ngwaọrụ> Extensions si ndọpụta menu on ruo na nke adreesị mmanya na Chrome. Mgbe ahụ gaa Chrome Web Echekwala na ụdị na Deezify. Mgbe ị na-ahụ ya, wụnye ya na gị Chrome nchọgharị. Mepee Spotify na nchọgharị na-egwu ọkacha mmasị gị music, mgbe ahụ, Deezify ga enyere gị aka ndị MP3 faịlụ. Dị nnọọ nwere a-agbalị.
Ngwọta 3: Spoty-mp3.com
Spoty-mp3.com bụ ihe online ọrụ na-enyere gị iji tọghata Spotify ka MP3 mfe. Ọ na-akwado nile di iche iche nke nchọgharị na ibudata Spotify music na faịlụ MP3 mfe.
Ọ bụ nnọọ mfe iji Spoty-mp3.com iji tọghata Spotify songs ka MP3. Ị na mkpa ịbanye website na mado URL nke Spotify music ka ide igbe n'etiti. Pịa oroma Search bọtịnụ na a website ga-amalite iji nyochaa na Spotify URL. Mgbe ha nyochasịrị, ọ ga-n'ịwa ahụ song anatara na Download button maka onye ọ bụla song. Ị naanị mkpa pịa Download button na-Spotify music enweghị hassle.
Update: Spoty-mp3.com-adịghị arụ ọrụ ọzọ ruru ya nkesa problem.If ọ na-arụ ọrụ ọzọ, ga na-ị emelitere.
Tụlee ihe 3 Great Ngwaọrụ ka Download Spotify ka MP3
Service Ụdị Desktọpụ software Nchọgharị Adon na Imea Online ọrụ
Main Atụmatụ Tọghata Spotify music, listi ọkpụkpọ, redio, albums na faịlụ MP3 Ibudata ọ bụla track si Spotify Tọghata Spotify listi ọkpụkpọ, albums na songs n'ime mp3
ọ dịghị mma ọnwụ;
Nchekwa, ngwa ngwa na anụ;
Akwado nile di iche iche nke ewu ewu nchọgharị
ọ dịghị mkpa iji wụnye omume na kọmputa
akwado nile di iche iche nke nchọgharị
mụ na mkpa Java nkwado
kọrọ na-virus site na ọrụ
naanị nkwado Chrome
ọ dịghị amara atụmatụ
Onyeikpe site onwe gị ịhọrọ ezi otu maka onwe gị na ihe ndị dị mkpa bụ akpatre-aga nke ọma iji tọghata Spotify na faịlụ MP3.
Olee otú Record Voice si nrụọrụ Mfe